Cannondale Synapse သည်စက်ဘီးကောင်းသလား။ - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > Cannondale synapse tiagra ပြန်လည်သုံးသပ် - သင်မည်သို့ဖြေရှင်းကြဘူး
Cannondale synapse tiagra ပြန်လည်သုံးသပ် - သင်မည်သို့ဖြေရှင်းကြဘူး
Cannondale Synapse သည်စက်ဘီးကောင်းသလား။
TheCannondale Synapse105 Isအကောင်းဆုံး$ 2,625စက်ဘီးမင်းဝယ်နိုင်။ မင်းစီးနင်းလိုက်ပါတာနဲ့ဈေးချိုတာကိုသဘောကျမှာပါ။ အဆိုပါထုတ်ယူ: အဆိုပါSynapseခံနိုင်ရည်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်ချောမွေ့။ သက်တောင့်သက်သာရှိသောလမ်းကိုလိုချင်သူများအတွက်ဆိုင်ကယ်ဒါ့အပြင်ပြိုင်ပွဲမော်ဒယ်၏လျှပ်တပြက်နှင့်ပေါ့ပ်အချို့ရှိပါတယ်။
ဟေ့ယောက်ျားတွေ၊ ဒါကစက်ဘီးစီးခြင်းနဲ့ဘဝကပေတရုပဲ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Cannondale Synapse ကိုလေ့လာရန်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤနေရာမှနှင်ထုတ်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ရောက်သည်ထင်သည်ထက်ဆီးနှင်းများစွာရှိသည်။ ဒါတောင်မှငါတို့ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလှည့်ဖျားကာယူလိုက်မယ်၊
သွားခွင့်ပြုပါ။ Cannondale ကို Synapse နှင့်အတူလက်ထပ်ခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲ၏ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ဖြောင့်မတ်သောသက်တောင့်သက်သာရှိမှုတို့ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်သည်။ ယုံကြည်မှုရှိမည်။ ဘောင်အတွင်းရှိလုပ်ဆောင်မှုကိုအားပျော့စေပြီးသင်၏တာယာများနှင့်ဆက်နေရန်သေချာသည်။ လမ်း။
၎င်းတို့သည်ဖော်မြူလာ ၁ ပြိုင်ကားတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ ဒါကြောင့် synapse ယေဘုယျအားဖြင့်အဆင်ပြေများနှင့်အနည်းငယ်ပိုပြီးဖြေလျော့ပေးခြင်းလမ်းဆိုင်ကယ်ဖြစ်သော်လည်း။ သင်ခြေနင်းကိုနှေးစေလိုလျှင်, ဒီအောင်မြင်ရန်ဘောင်ထဲမှာတင်းကျပ်မှုအများကြီးရှိသည်။
၎င်းကိုရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Power Pyramid အောက်ခြေ bracket ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပါဝါပိရမစ်သည်အောက်ခြေ bracket တွင်တိုက်ရိုက်ကွဲပြား။ ဤအောက်ခြေ bracket ၏နှစ်ဖက်စလုံး၏တောင့်တင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ သင်ခြေနင်းတိုင်းမင်းအောက်ခြေ bracket ကိုတောင့်တင်းခိုင်မာစေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်လမ်းကိုခြေထောက်ခိုင်ခံ့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။
ငါ frame ကိုတလျှောက်ပြန်လာတဲ့အခါ, synapses ကျော်တစ်လျှောက်လုံးသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကိုရှိပါတယ်, ပြီးတော့အဲဒီ frame ကိုငါ့ထံသို့ပိုမိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကို၎င်းကိုသိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ဆောင်မှုဟုခေါ်သည်။ သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်သင့်အားတုန်ခါမှုလျော့နည်းစေပြီးဆိုင်းငံ့ခြင်းကိုအနည်းငယ်ပေးလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ မြေတူးခြင်း၊ ခြုံငုံဆိုင်ကယ်ပိုပြီးအဆင်ပြေ။ ၎င်းတို့တွင်အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်နှင့်ပါ ၀ င်သည့်ကောင်းမွန်သောအတွင်းပိုင်းကေဘယ်ကြိုးလမ်းကြောင်းအားလုံးရှိသည်။
ဤစက်ဘီးမှဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ် များမှလွဲ၍ မည်သည့်ကေဘယ်ကြိုးများကိုသင်အမှန်တကယ်မမြင်နိုင်ပါ။ သူတို့ကဟိုက်ဒရောလစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကိုဖြတ်ပြီးလမ်းဆုံလမ်းခွကိုဖြတ်ပြီး rotor ကိုတောင်မောင်းတယ်။ ဒီတော့ Cannondale Synapse က Synapse Endurance Road Geometry ကိုသုံးတယ်။ ဆိုလိုတာကမင်းမှာပိုကြီးတဲ့ ဦး ခေါင်းပြွန်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ ဒါကလက်ကိုင်ပုဝါတွေကိုပခုံးပေါ်တက်စေတယ်။ မင်းရဲ့နောက်ကျောကမင်းပြန်လာပြီ၊ တစ်ခုဖြောင့်မတ်အဆင်ပြေဂျီသြမေတြီ။
ဒါကငါအရင်ဝယ်ခဲ့တဲ့လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်အမျိုးအစား။ ဒါကအကြောင်းပြချက်က ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များကစပြီးယူနီဖာမှာရှိတဲ့ငါ့အဖေဆိုင်ကယ်လိုပဲငါဟာအတော်လေးစိတ်အေးလက်အေးသံမဏိစက်ဘီးကိုအမြဲစီးခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုရန်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့တန်ဖိုးကို။
ငါခရီးဝေးကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့လို့, ငါမိုင်ရာပေါင်းများစွာစီးလေ့ရှိတယ်။ ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ချင်တဲ့အချိန်မှာငါခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ဂျီသြမေတြီကိုကြည့်လိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကာဗွန်ဘောင်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ငါ့သံမဏိဆိုင်ကယ်အဟောင်းမှခံစားခဲ့ရသည့်သက်တောင့်သက်သာခံစားမှုကိုပေါင်းစပ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီစက်ဘီးတစ်စီးဆိုတာမင်းသိပြီငါစီးနင်းလိုက်ပါနိုင်တဲ့တခြားစက်ဘီးအမျိုးအစားအားလုံးဟာကျွန်တော့်အတွက်ရန်လိုလွန်းလွန်းတယ်၊ အရမ်းကိုနက်ရှိုင်းလွန်းတယ်၊ ဒီမှာအရမ်းနက်တယ်၊ မင်းဒါကိုသိတယ် ငါတစ်နေ့လုံးနှစ်သိမ့်မှုခံစားခဲ့ရတယ်လိုချင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး၊ စူးစမ်းလေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊ လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေထွက်လာပြီးနောက်ငါစက်ဘီးကိုသွားမယ့်နေရာကိုသိပြီ။
ဒီတော့ဒီမှာ Cannondale Synapse Carbon Ultegra di2 ဟိုက်ဒရောလစ် disc ဘရိတ်နှင့်အတူသင်ကကျောက်စရစ်များနှင့်တနေ့လုံးလေ့လာစူးစမ်း, ပျော်စရာရှိသည်, အများကြီးနှစ်သိမ့်ချင်သည်ဖြစ်စေ tarmac နှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်တိုက်ခြင်းရှိစေခြင်းငှါ, အလွန်လမ်းမကြီးသို့မဟုတ်ပြိုင်ကားစက်ဘီးသည်အလွန်ကြီးစွာသော Off- လမ်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ် အားလုံး၌ကြီးစွာသောလမ်းဆိုင်ကယ်ပါဝါ။ ဒါကြောင့်ဟေး၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေနောက်ထပ်ကြည့်ချင်ရင်ငါတို့ပြိုင်ကားစက်ဘီးစာရင်းကိုဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးပိုမိုပေါ့ပါးသည့်roadရာမ TCR Advanced Pro One တစ်ခုဖြစ်သည့်လုံး ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်လုံး ၀ န်းကျင်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
subscribe သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နှင်းမကျခင်သို့မဟုတ်သင်လိုလားသမျှနောက်မှ ထွက်၍ မောင်းနှင်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂရုစိုက်ပါ၊ ပျော်ပါ။
Cannondale Synapse သည်အမြန်စက်ဘီးဖြစ်ပါသလား။
TheSynapseလမ်းတစ်လမ်းပါဆိုင်ကယ်အလင်း၊အစာရှောင်နှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အဆင်ပြေ။ မင်းရဲ့စီးတာကပိုကြာလိမ့်မယ် သင်အနိုင်နိုင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
Cannondale Synapse သည်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးတစ်စီးလား?
သင်တစ် ဦး လမ်းပိုင်းအပေါ်သို့ဖြစ်ပျက်လျှင်ကျောက်စရစ်ယူရန်မကြောက်ပါနှင့်။ ဒီဖြည်းဖြည်းညင်သာပေမယ့်ရှည်လျားတဲ့စီးနင်းမှုတွေကကျွန်တော့်လမ်းတစ်ဝက်လောက်နဲ့ခရီးကိုဖြတ်သန်းပါတယ်Synapseဒီမှာပြီးပြည့်စုံသောမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောင်၏အင်္ဂါရပ်များသည်တည်ငြိမ်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထင်ရှားစေသည်။
သင်ကကျောက်စရစ်ကိုစီးဖို့ကျောက်စရစ်စက်ဘီးမလိုအပ်ပါဘူး။ လူတွေဟာအမြဲတမ်းအမှိုက်တွေကိုစက်ဘီးစီးလေ့ရှိတယ်။ သငျသညျကျောက်စရစ်တွေအများကြီးစီးနင်းသို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်ကိုပိုမိုစီးနင်းလိုလျှင်, သင်ပိုမိုသက်သာခံစားရရန်နှင့် Tarmac မှထွက်ခွာပိုမိုပျော်စရာရှိစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်သင်၏လမ်းဆိုင်ကယ်ရဖို့ကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မယ်။
အဓိကသော့ချက်ကတော့အမြဲတမ်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေဘဲသင်ဟာ၎င်းကိုပြိုင်ကားစက်ဘီးထဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူပြန်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ (ရော့ခ်ဂီတ) သင်ပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်သည်မှာပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတာယာများဖြစ်သည်။ လက်မစည်းမျဉ်းသည်သင်၏ဘောင်နှင့်ခံတပ်ထဲသို့လုံခြုံစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အကျယ်ဆုံးသောတာယာနှင့်ကိုက်ညီရန်ဖြစ်သည်။
၂၃ မိုင်တာယာရှိကျောက်စရစ်လမ်းများကိုသင်အမှန်တကယ်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုးဖေါက်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လျှော့ချရန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်၎င်းကိုစုပ်ထုတ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင်သင်မောင်းနှင်မှုသည်နှေးကွေးမည်ဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေမှုလည်းနည်းလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှာသင်ဟာ ၂၈ မိုင်ကျယ်တဲ့တာယာထဲကိုခင်ဗျားကိုဆွဲဆောင်နိုင်ချင်တယ်၊ သင်ဟာ 32 brus ရနိုင်မယ်၊ ဘရိတ်ဘရိတ်နဲ့ကျောက်စရစ် urance စက်ဘီးကိုကိုင်တွယ်နိုင်မှာပါ။ ဂိမ်းထဲမှာ။
အခြေအနေတွင်ထားရန်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးပေါ်တွင်သင် ၄၀ လက်မစက်ဘီးကို ၄၅ မီလီမီတာအကျယ်ရှိတာယာကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဒါကတကယ့်ပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ပါ။ ကျွန်တော်မှာနဂါးတာယာရှင်းလင်းရေးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကကြီးမားနိုင်အောင်ရှိမရှိကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ (ရော့ခ်ဂီတ) ကျောက်စရစ်ခဲသည်ကျောက်တုံးကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စက်ဘီးစီးခြင်းကိုတတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ပေးရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
ကျောက်တုံးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောပန်းချီကားများကိုခြစ်ရာခြစ်ခြင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဘောင်၊ ဘောင်တိပ်သို့မဟုတ်ရဟတ်ယာဉ်တုံးပေါ်တွင်ချိုင့် ၀ င်ခြင်းကိုပင်ဆိုလိုသည်။ ယခုငါစာသားရုံတောင်ကြီးစက်ဘီးယောက်ျားတွေကနေခိုးယူခဲ့သည်။ ဤသည် 3M မှအထူးကြံ့ခိုင်အနက်ရောင် mastic တိပ်သည်။
ထိုကွင်းဆက်ကွင်းဆက်များအတွက်လုံးဝပြီးပြည့်စုံပါသည်။ အကြောင်းမှာကျောက်တုံးများ၏အမှန်တကယ်သက်ရောက်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပြင်သင်ကကွင်းဆက်လွှဲများပိုမိုရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီတော့ဒီဟာကအဲဒီမှာရှိအထိခိုက်မခံတဲ့ကာဗွန်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးမဟာမိတ်များအတွက်အပိုဆုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဆူညံသံကိုအနည်းငယ်ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ပြီးရင်မင်းကထူထဲတဲ့အနက်ရောင်အရာတွေအပြင်ကြည်လင်တဲ့တိပ်ခွေကိုရရှိနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ရှေ့ဘီးကကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေကိုကာကွယ်ဖို့ငါကအောက်ဘက်ပြွန်ကိုလိုလိုလားလားသုံးလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့သင့်ထိုင်ခုံ၏အတွင်းပိုင်းသည်ထိုင်ခုံပြွန်နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ငါ Terrain ကိုငါအမြဲထည့်လေ့ရှိတယ်၊ ငါ့လက်ကိုင်အစွန်အဖျားတွေကိုတကယ်ကျောက်တုံးတွေပုတ်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကရာဘာအနိမ့်ပိုင်းကိုကျော်သွားတဲ့ဘမ်ဘားတွေဆီကိုရာဘာအနည်းငယ်ထည့်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကကောင်းတဲ့နာမည်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်တစ်ခုကဂီယာအချိုးအကြောင်းပါ။ ကျောက်စရစ်ကိုမောင်းနှင်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသောကြောင့်နှေးကွေးလေ့ရှိပြီးသင်သည်သေးငယ်သောစက်ကိရိယာများဖြင့်အမှန်တကယ်သွားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမြန်ဆုံး၊ အလွယ်ဆုံးနှင့်ဈေးအပေါဆုံးသည်သင်၏နောက်ကျောရှိသည့်အရာတစ်ခုကိုပိုမိုကြီးမားသောအရာတစ်ခုသို့လဲလှယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်သင်ကအနည်းငယ်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ဘက်လှည့်စားသူများကသင့်ကိုသုံးနိုင်သောကက်ဆက်အရွယ်အစားကိုကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ ဒီကိစ္စမှာ Dura Ace ရဲ့နောက်ဘက်တြိဂံ ailleur နဲ့အတူငါ ၁၁ ထဲကနေ ၃၀ ထဲကိုထည့်နိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့်အလျားအလျားရှိ Shimano လှောင်ထားသည့်လှေကားထစ်များသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ကြီးမားသောအိတ်များဖြင့်သင်သည် ၁၁ မှ ၃၂ အထိရနိုင်ပြီး ၁၁ မှ ၃၆ အထိပင်ရနိုင်သည်။
သို့သော် Wolf Tooth သည်လမ်းဆက်သွယ်မှုဟုခေါ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုရောင်းချသောအလွန်သေးငယ်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ဒါကအခြေခံအားဖြင့်သင့်ရဲ့ derailleur ဆွဲကြိုးကိုရှည်စေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့် ၁၁ ကနေ ၄၀ ကက်ဆက်ကိုအရမ်းစီးနိုင်မှာပါ။ သင်သင်တန်းလုပ်နိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာသင်၏ရှေ့ဆက်၌သင်၏ကွင်းဆက်များကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တွင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကွင်းဆက်တစ်ခုရှိပြီး၊ ၅၀၃၄ ကွင်းဆက်အရှည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါကစူပါကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုအတွက် crank တစ်ခုလုံးကိုလဲလှယ်ခြင်း မှလွဲ၍ အတွင်းပိုင်းလက်စွပ်သေးသေးလေးကိုမရနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါကကျောက်စရစ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရင်ငါလုပ်ချင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်နိုင်တယ်။
လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်တွေကတော်တော်ကြံ့ခိုင်ပေမယ့်စျေးကြီးတဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုကမင်းရဲ့ဘီးတွေပါ။ သူတို့ဟာမလုံလောက်တာမို့၊ ကျောက်စရစ်ကိုကားမောင်းတဲ့အခါမှာကျောက်တုံးကြီးကြီးတွေ၊ ကြီးမားတဲ့ကျောက်တုံးကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ပိုလွယ်ကူပြီး၊ အလွိုင်းဘီးနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်မဆိုးမဟုတ်ပါက fix နိုင်။
ဒါပေမယ့်ကာဗွန်စက်ဘီးပေါ်ကဒါကသေစေနိုင်တယ်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်သည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ၏ဂုဏ်သတ္တိကြောင့်မခိုင်မာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး ။
ဒီတော့မင်းမှာပိုက်ဆံရှိမယ်ဆိုရင်၊ စိတ်ကူးကမမျှော်လင့်ဘဲဈေးကြီးတဲ့ဘီးတွေထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုမဟုတ်ဘဲသူတို့ဟာပိုအားကောင်းလာတာကြောင့်၊ ပြီးတော့သင့်ကိုလှပတဲ့ဘီးတွေရှေ့ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ကျောက်တုံးတိုင်းကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုလို့ပဲ။ ထပ်ဆောင်းအပိုဆုတစ်ခုအနေနှင့်သင်သည်ဒုတိယမြောက်ဘီးအစုကိုသင်၏အဆီကျောက်စရစ်တာယာများနှင့်သင်၏အဆီကျောက်စရစ်အကန့်များဖြင့်အမြဲချန်ထားနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အခြားစုံတွဲတစ်တွဲသည်သင်၏လမ်းတာယာများနှင့်သင့်လမ်းကက်ဆက်တွင်ကျန်နိုင်သည်။
ယောဂ pose ကိုလောင်ကျွမ်းကယ်လိုရီ
ထို့ကြောင့်သင်၏ကျောက်စရစ်ခဲများနှင့်သင်၏စက်ဘီးကြားတွင်သင်၏ဘီးများအားပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖရန့်မရှိခြင်း၊ (ဂျက်ဇ်ဂီတ) ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပြုပြင်ခြင်းသည်တောင်တက်စက်ဘီးဖိနပ်နှင့်တောင်တက်စက်ဘီးနင်းခြင်းကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်ကြီးတောင်ငယ်၏ဖိနပ်ကိုကျောက်စရစ်များဖြင့်စီးနင်းနိုင်သောကြောင့်ရုတ်တရက်ထွက်ပြေးရန်မလိုတော့ပါ၊ သို့သော်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်လျှင်အလွန်လျင်မြန်စွာတွေ့နိုင်သည်။ ။
ဒါကြောင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရဲ့ဖိနပ်ကအပိုဆုတစ်ခုပါ။ ငါဟာတောင်တက်စက်ဘီးနင်းတွေထက်လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်နင်းတွေနဲ့ကုန်းနှီးမှာအချိန်ဖြုန်းချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့မင်းကဆိုင်ကယ်စီးဖိနပ်ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးကြိုးတပ်လို့မရဘူး၊ သို့သော်အပိုဆုတစ်ခုရှိသေးသည်၊ ၎င်းတို့သည်နှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုကလစ်ကိုလွယ်ကူစေသည်။
ကောင်းပြီ, ငါ့ပြုပြင်ထားသောပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ရှိပါတယ် ကျယ်ပြန့်တာယာများ၊ ကွဲပြားခြားနားသောဘီးများကျွန်ုပ်ခြေနင်းများလဲလဲပြီးဖိနပ်လဲလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာနောက်ထပ် circuit တစ်ခုရှိပြီး frame tape နဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ပေးတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲကျန်တော့တာက Baggies ဆိုတာစိတ်အခြေအနေတစ်ခုလို့ပြောတာပဲ။ ပြီးတော့ခါးပတ်အိတ်တွေကလည်းကျောက်စရစ်ခဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရုံသာမကပဲခေတ်မှီတယ်။ ငါလိုအပ်သမျှမုတ်ဆိတ်မွေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်နိုင်သည်ဤအရာတစျခုအဘို့အ GCN အပေါ်တစ်သက်တာစောင့်ဆိုင်းနိုင်ဘူး။ သင်တို့အတွက်နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ခုရှိသေးသည်၊ Rock on, Gravel! (ဂျက်ဇီဂီတ)
Cannondale Synapse ဘယ်လောက်လေးလဲ
ခြေနင်းနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောစက်ဘီးအဖြစ်Synapseအလွိုင်းဘီးများနှင့်အလွိုင်းအပြီးသတ်ကိရိယာအစုံကိုစဉ်းစားလျှင်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သော ၈.၂ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ကိုချိန်ညှိသည်။ ပို၍ ပင်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည်စက်ဘီးကဲ့သို့တက်သည်အလေးချိန်6kg အမှတ်အသားနှင့်နီးကပ်လာ။
AreCannondale ကောင်းသောစက်ဘီး? ဟုတ်တယ်၊Cannondale စက်ဘီးအရမ်းများကောင်းတယ်။ သင်ငွေမည်မျှပင်အသုံးပြုပါစေဂရုတစိုက်စုဆောင်းရရှိလိမ့်မည်စက်ဘီးနောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပိုက်ဆံများများပိုရလာလိမ့်မယ်ပိုကောင်းသတ်မှတ်ချက်များ, ဒါပေမယ့်ပင် entry-level ကိုCannondaleသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုအသုံးပြုလျှင်မော်ဒယ်များကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပါ။11.05.2021
သငျသညျ Cannondale Synapse ပြိုင်နိုင်သလား?
TheCannondale Synapseဟုတ်တယ်တစ်ခုသူတို့အားခံနိုင်ရည်လမ်း၏စက်ဘီးမင်း'' တစ် ဦး သင့်လျော်သောအဘို့အမှားများအတွက်ဆင်ခြေပေးလိမ့်မယ်ပြိုင်ပွဲဆိုင်ကယ်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲရောနှောနေရန်ဖြစ်ခဲ့သည်ပြိုင်ပွဲရှည်လျားသောခံနိုင်ရည်စီးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဂျီသြမေတြီကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။၁၀ ။ 2017 ။
Cannondale Synapse 105 သည်ကျောက်စရစ်စက်ဘီးတစ်စီးလား?
TheCannondale SynapseCarbon Disc SE၁၀၅အမျိုးသားများအတွက် 2019ကျောက်စရစ်စက်ဘီးစံသတ်မှတ်ပါသည်Cannondale Synapseထိုသို့တက် beefsကျောက်စရစ်စီးနင်း။ စံSynapseလမ်းမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်စီးနင်းရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စက်ယန္တရားဖြစ်သည်။ ကဆိုင်ကယ်အဲ့ဒါကရက်ပေါင်းများစွာအပြည့်အဝဓာတ်ငွေ့ကိုစီးနိုင်တယ်။
ငါ Cannondale ဆိုင်ကယ်ဝယ်သင့်ပါသလား
ဟုတ်တယ်၊Cannondale စက်ဘီးသူတို့သည်အခြားလူကြိုက်များသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းလေ့ရှိသော်လည်းငွေကုန်ကျသည်။ ဤအမှတ်တံဆိပ်မှမော်ဒယ်များသည်များသောအားဖြင့် CAAD နှင့် BallisTec frames များ၊ Lefty နှင့် Kingpin suspension systems, SmartForm aluminium, SAVE micro-suspension စသည်ဖြင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်များပါရှိသည်။11 2021 ။
Cannondale သည် Schwinn ထက်ပိုကောင်းသလား။
နွေရာသီမှာတစ်ပတ်ကို ၁၅ မိုင်သွားရမယ်ဆိုရင်ထို့နောက်ရSchwinn။ သငျသညျပိုမိုလေးနက်စီးနင်းလုပ်ဖို့သွားလျှင် Trek သို့မဟုတ်Cannondale။
အဆိုပါ Cannondale synapse disc ကို tiagra ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ကယ်လား?
Cannondale Synapse Disc Tiagra ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ Synapse Disc Tiagra သည်ဆိုင်ကယ်လေးခုဖြစ်သော Synapse Alloy Disc လိုင်းတွင်တန်ဖိုးနည်းသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ Synapse လိုင်းရဲ့ pricer မော်ဒယ်များအားလုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းရည်ကိုရှာဖွေနေမြင်းစီးသူရဲရည်ရွယ်ဘတ်ဂျက်စျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းမှုကိုပါပဲ။
Cannondale alapse disc သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်း။
ယခုခေတ်တွင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စက်ကိုသတ်မှတ်ပေးသောပထမ ဦး ဆုံးစက်ဘီးတစ်စီးဖြစ်သည့် Synapse သည်အမြန်နှုန်းကွာခြားမှုမရှိဘဲစက်ဘီး၏စွယ်စုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပေါင် ၉၉၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၁,၃၉၉ Synapse AL Disc ရှိသည်။ ဈေးနှုန်းမှာအနည်းငယ်မျှသာမြင့်ပြီး SKS mudguards (£ 35) ။ ဒါဟာစက္ကူပေါ်မှာအတော်လေး bargain ပါပဲ။
ဘယ် Cannondale ဆိုင်ကယ်ဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲ?
Cannondale Synapse Hi-Mod Disc Dura-Ace Di2 Level5ကျွမ်းကျင်သူယခင်ဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Cannondale Synapse အသစ်သည်ပိုမိုချောမွေ့သည်၊ သက်သောင့်သက်သာ၊ ပိုမိုပေါ့ပါး။ ပိုမိုခိုင်မာသော - နှင့်ယခုအချိန်တွင်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စက်ဘီးတစ်စီးဖြစ်သည်။